Mayelana Nathi - Luoyang Hongguang Office Fitment Co., Ltd.
I-Luoyang Hongguang Office Fitment Co., Ltd. yasungulwa ngo-1989, njengenye yamabhizinisi asemuva agunyazwe yiNational Quality Examination Centre, yaqala yaphasisa i-ISO 9001 International Quality System Certification, ISO14001 International Environment System Certification, National Environment & Quality System Certification, I-National 3C System Certification, yenza zonke izinhlobo zefenisha yensimbi yasehhovisi, ifenisha yesikole.
Ibhizinisi litshala u-US$4.6 wezigidi, ohlomisa ngomshini wokuhlanganisa othomathikhi we-digital-control owusayizi omkhulu we-9-working-tech, CNC shearing/bending/CO2/oxy-arc welding/CNC laser cutting machines, amapayipi bender, ama-automatic packers. .Kukhona ochwepheshe abangaphezu kuka-200 bokuklama, ukufakwa, iphakheji, ukulawula izinga, ukungenisa nokuthekelisa, abanolwazi lweminyaka eyi-10.
Imikhiqizo eyinhloko ihlanganisa iKhabhinethi yokufayila, ikhabethe, ilokha, ishelufu eliphathwayo/lokulawula idijithali, ishalofu lezincwadi elinamacala amabili, indawo yokulala yesikole eyodwa/umbhede owumbhede, isitolo esikhulu esilula/ esimaphakathi/ esindayo/indawo yokugcina impahla njll. Okungenhla izinto zonke zigcwele phansi ukuze zithunyelwe ngokushesha, ukufakwa okulula, ukunakekelwa okufanele.
Imboni inikezwa njengeziqu zebhizinisi elithi "Bheka Ikhona Ngekhwalithi futhi Uthuthukiswe Ngekhasimende" nguHulumeni Wabantu Omaphakathi wedolobha laseLuoyang, inhlangano ethi "Imikhiqizo Ethembekile Yabathengi" yi-Henan Provincial Consumer Association, "Star Enterprise" yiKomidi Lenhlangano Kamasipala.
Ukujabulela idumela eliphakeme phakathi kwabasabalalisi, abasebenzisi bokugcina, abasakaza emhlabeni wonke, njengeNingizimu-mpumalanga ye-Asia, iYurophu, iNyakatho Afrika, i-Oceania, iMelika, phakathi kwabo, kukhona ama-tycoon amaningi wefenisha: I-ARGOS (UK), i-WFI (Sweden ), Floreben(Nigeria), Oh-Ami(Japan), Multi-Stor(Singapore), Exim/Dexion(Australia), Staples/Durham(USA), Can-Bramar(Canada), Maletek (Chile) njll. Imikhiqizo afakwe kahle kohulumeni, amabutho, izikole, izibhedlela njll., futhi ahlala ebeka ama-oda kithi, nyanga zonke, njalo ngonyaka.
Kuze kube manje, sesisungule ubudlelwano besikhathi eside bebhizinisi namakhasimende avela emazweni angaphezu kuka-30, siyazethemba ekuhlinzekeni ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu ethunyelwa ngesikhathi, ukuthengiswa okuhle kakhulu ngemuva kokuthengisa, futhi sinamandla okukhiqiza anele ukusiza ikhasimende ukuthi lihlole kabanzi. izimakethe zomhlaba wonke ezibanzi.
Sihambisana ngobuqotho nangokuqinile nesinyathelo sakho esizinzile sokuya phambili.